July 2014 - iftineducation.com
Ceebta naga astura Heesahan Akhlaaq xumaa ka muuqata -Ku haay -Daawo
aadan21 / July 31, 2014
iftineducation.com – Waxaa barnaamijka ka baxa Tv-ga somali Channel ee Isir Raaca somaliga Abwaanka inta badan daadihiya uu ku dhegay Laba heesood oo bulshada soomalida mudooyinkaan danbe ay isla dhex marayeen. Heesaha ayaa kala ah HADII AADAN TUMAYN oo ay Qaado Fannaanada Nasteexo Indho iyo Ku haay ku haay oo ay Qaado Fanaanada Hani UK. Wuxuu ku sheegay Heesahaasi Ceeb iyo…
Daawo Waxa ka dhacay xeebta Muqdisho Dabaal Rag iyo dumar & Damaashaadka
iftineducation.com – Ciida soonfureed ee sanadkan ayaa si weyn uga duwaneyd sanadkan sidii hore, waxaana shacabku ay isugu soo bexeen goobaha barxadaha, xeebaha iyo wadooyinka magaalada Muqdisho. Waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa muuqaal laga soo duubay Xeebta magaalada Muqdisho halkaasi oo ay udabaal tageen qaybaha kala duwan ee Bulshada oo isugu jira Rag iyo dumar. RIIX HALKAN KA DAAWO BASHAALKA XEEBTA…
Dhageyso: Carruur gaajo ugu dhimatay Buulobarde iyo dadka oo qaxaya
iftineducation.com – Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in carruur ay gaajo ugu dhinteen magaalada Buulobarde. Magaaladaasi ayaa go’doon ku jirtay tan iyo markii dowladda ay kala wareegtay Al-Shabaab. Dadkii ku noolaa ayaa hadda billaabay inay qaxaan. Haddaba, Cabdi Cabdalla, waxa uu ka mid yahay dadka ka soo cararay magaalada Buulabarde, waxaa uu sheegay inay labo canug ay gaajo awgeed…
Fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Maxamed Bk oo Jirdil iyo Xabsi la Isugu Daray+Xasan dhuxul oo Lagu Amray in uu Cafis Kabixiyo Wareysigii SNTV aay Siiyeen (Daawo Video)
iftineducation.com – Warar Aay Heshay Warbaahinta sheegenews ayaa sheegaya in La jirdilay Guud ahaan Fanaaniintii ka qeyb qaadatay barnaamijkii ciida ee talafeshinka Qaranka soomaaliya SNTV oo ahrgeysa si qarsoodi ah loogu soo qabtay. Maxamed Bk iyo Nimcaan hilaac iyo Yurub geenyo ayaa warar sheegayaan in Saacado laxiray iyadoona Xoog ciidamo aay ku kaxeeyeen . Ciidamada ayaa waxaa aay Qaar kamid ah…
War Deg Deg Ah: Daawo: Dilkii Saado Cali Warsame Oo Isugu Biyo Shubtay Xafiiska Xasan Sheekh +Muuqaal
iftineducation.com – Munaadibad loogu bora diiqayey fanaanadii qaranka soomalaiyeed saado cali warsame oo 25kii bishii romadaan lagu dilay magalada muqdisho ayaa caawa ka dhacday dabaqa sare ee abdi guray . Munaasibadan waxaa soo qaban qaabiyey golaha deeganka Buuhoodle ee maamulka khaatumo kulankan oo ahaa kulan ay ku dheehan tahay murugo iyo Tacsi ayaa looga hadlay sadex qodob qodobka. Koowaad masuuliyiintii kulankan…
Daawo : Seydou Keita Oo Ka Hadlay Sababta Uu U Gacan Qaadi Waayay Pepe
iftineducation.com – Seydou Keita ayaa ka hadlay dhacdii dhex martay isaga iyo Pepe intii lagu jiray kulankii Roma iyo Real Madrid ee ku dhamaaday halkii gool ee Totti . Waxa uu sheegay in sababta uu u gacan qaadi waayay Pepe ay tahay in sanado ka hor uu ku tilmaamay daayeer xilligii uu joogay Barcelona oo kulan El Clasico wada lahaayeen Real…
Fanaan Naftiisa canaantay Oo dirbiyada feeeraya-Daawo
iftineducation.com – Fanaanka codka halaasiga ah leh ee Gulled Ahmed ayaa soo saaray hees cusub oo la magac baxday Rooda. Waa farsamadii Ibrahim Eagle, erayadii iyo laxankii abwaan Habiil Mubashar iyo codkii macaanaa ee Gulled Ahmed, Heestan ayaa waxaa durbaba ay soo jiidatay Malaayiin qof oo soomaali ah Oo ciida ku madadaalayay qaabka cajiibka ah ee ay heestan usoo baxday. RIIX…
Dowladaha reer galbeedka oo furay Xarumo qaliinka iyo daaweynta Xeywaanadka lagu sameeyo (Daawo Sawirada)
iftineducation.com – Halkaan ka daawo Sawiro ka turjumayo Horumarka uu Caalamka ku talaabsaday, taasi oo noqoneyso daaweynta Xeywaanaadka dad cunka Sida Libaaxa, Waraabaha, Shabeelka, Masaska, Danyeerada iyo Bisadaha, waxaana loo dabiibayaa sida Bani’aadamka iyadoona la marinaayo Scan gabi ahaan Jirka. Horumarka daaweynta Xeywaanaadkaasi ayaa waxaa u badan wadamo ay kamid yihiin Mareykan, Britain, Faransiis-ka iyo wadamo kale oo iyaguna xiligaani ku…
Xasaasiyadda Heshiiska maamul u sameynta Mudug & Galguduug, doorka Dowladda Federaalka iyo Maqnaanshaha Puntland
iftineducation.com – Iyada oo muddooyinkii danbe ay magaalada Muqdisho ku sugnaayeen masuuliyiin ka socotey maamulada Galmudug, Ximan iyo Xeeb iyo Ahlu-sunnah ayaa maanta lagu shaaciyey heshiis ay wada gaareen dhinacyadaas, dowladduna ayidey kaas oo maamul loogu dhisaayo Gobolada Mudug iyo Galguduud. Gobolka Mudug degmooyinkiisa dastuurka federaalku ictiraafsan yahay ee ka horeeyey 1991 waxay kala yihiin: Gaalkacyo Galdogob Jariiban iyo Xarardheere Waxaa…
Keenya oo markale raaf ku bilaawda soomaalida
iftineducation.com – Wararka laga helayo Magaalada Nairobi ee Caasimada Dalka Kenya ayaa sheegay in 3 Muwaadin Soomaali ah oo ku Noolaa gudaha Dalka Kenya Meydadkooda lagu arkay Magaalada Nairobi ee Caasimada Dalkaasi. Goobjooge la hadlay warfidis.com ayaa sheegay in Muwaadiniinta Soomaalida ee Meydadkooda laga helay Kenya ay ahaayeen Ganacsato ku Noolaa Magaalada Nairobi. Waxaa sidoo kale la sheegay in Ciidamada Booliska…